सरकारको तर्फबाट :२८ अर्ब सकिँदा ४२० घर मात्र निर्माण, धुर्मुस सुन्तलीको तर्फबाट ५ करोडमा पूरै एकिकृत नमूना बस्ती !
ARCHIVE, NEWSPAPER » सरकारको तर्फबाट :२८ अर्ब सकिँदा ४२० घर मात्र निर्माण, धुर्मुस सुन्तलीको तर्फबाट ५ करोडमा पूरै एकिकृत नमूना बस्ती !
गैरसरकारी संस्थामार्फत वितरित अनुदानबाट मात्रै घर निर्माण
प्राधिकरणले ५ लाख ३४ हजार ५३ भूकम्पपीडित परिवारलाई पहिलो किस्तामा ५० हजारका दरले २६ अर्ब ७० करोड २६ लाख ५० हजार आवास निर्माणको अनुदान वितरण गरेको छ । दोस्रो किस्तामा ८२९ घरपरिवारलाई एक लाख ५० हजारका दरले १२ करोड ४३ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । तेस्रो किस्ता भने प्राधिकरणले अहिलेसम्म वितरण गरेको छैन । अहिलेसम्म २६ अर्ब ८२ करोड ७० लाख प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि खर्च गरेको छ । तर, तेस्रो किस्ता वितरण नभएकाले प्राधिकरणको कार्यविधिअनुसार कसैको पनि घर निर्माण पूरा भएको छैन । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।